Nguwuphi na lo mandla?
I-Federalism yinkqubo apho ababini okanye oorhulumente banokwabelana ngamagunya phezu kwendawo efanayo.
EUnited States, uMgaqo-siseko unika amandla athile kumabini ase-US kunye noorhulumente karhulumente.
La magunya anikwe iSihlomelo seshumi, esithi, "Amagunya anikezelweyo eUnited States nguMgaqo-siseko, angavunyelwe kuwo eMelika, agcinwe kwi-United States ngokulandelanayo, okanye kubantu."
Lawo magama alula a-28 abeka ezintathu iindidi zamagunya ezimela intsingiselo ye-American federalalism:
Ukubonakaliswa okanye "Ukubala" Amandla: Amandla anikwe kwi-Congress yase-US ngokukodwa phantsi kweSiqendu I, Icandelo 8 loMgaqo-siseko wase-US.
Amandla aGciniweyo: Amagunya angagunyaziwe kurhulumente wesigqeba kuMgaqo-siseko kwaye ngoko ke anikezelwe kumazwe.
Amandla alinganayo: Amandla abelwana nguRhulumente wephondo kunye namazwe.
Ngokomzekelo, iCandelo I, iSigaba 8 soMgaqo-siseko unikela i-US Congress amandla athile apheleleyo njengokuhlanganisa imali, ukulawula ukuhweba phakathi kunye nokuhweba, ukuvakalisa imfazwe, ukuphakamisa umkhosi kunye nemikhosi kunye nokuseka imithetho yokufuduka.
Ngaphantsi kweSilungiso se-10, amagunya angaboniswa ngokukodwa kuMgaqo-siseko, njengokufuna iilayisenisi zabaqhubi kunye nokuqokelela iirhafu zepropati, ziphakathi kwamagunya amaninzi "agcinwe" kwilizwe.
Umda phakathi kwamagunya kaRhulumente wase-US kunye nalawo mazwe aqhelekile acacile.
Ngamanye amaxesha, akunjalo. Nanini na ukusetyenziswa koogunyaziwe karhulumente kunokuba kungqubuzana noMgaqo-siseko, siphelela ngemfazwe yamalungelo "okutshoyo" okufuneka ahlale esombulule kwiNkundla ePhakamileyo.
Xa kukho ukungquzulwano phakathi kombuso kunye nomthetho ofanayo wesigqeba, umthetho wesigqeba kunye namagunya anqumla imithetho nemimandla karhulumente.
Mhlawumbi inkulu enkulu imfazwe ngokubhekiselele kumalungelo okuhlukana-okwenzekayo ngexesha lomzabalazo wamalungelo omphakathi ka-1960.
Ulwahlulo: Ulwaphulo oluPhezulu lwamalungelo kaRhulumente
Ngo-1954, iNkundla ePhakamileyo kwiCandelo leBrown leCandelo eliPhambili leBhodi lezeMfundo liye lalawula ukuba izixhobo ezizimeleyo zezikolo ezixhomekeke kubuhlanga zilinganayo kwaye ngoko kuphulwa kweSilungiso sesi-14 esichaza ngokuyinxalenye: "Akukho rhulumente luza kwenza okanye linyanzelise nawuphi na umthetho eziza kubangela amalungelo okanye ukukhuseleka kwabemi baseUnited States; kwaye akukho naluphi na urhulumente olunciphisa nawuphi na umntu wobomi, inkululeko okanye ipropati, ngaphandle kwemigaqo yomthetho okanye ayivumeli nawuphi na umntu ngaphakathi kolawulo lwakhe ukukhuselwa okulinganayo kwemithetho. "U
Nangona kunjalo, amaqela amaninzi aseMzantsi akhetha ukungahoywa isigqibo seNkundla ePhakamileyo kunye nokuqhubeka nokwenziwa kocalulo ngokobuhlanga ezikolweni nakwezinye izibonelelo zoluntu.
Izizwe zisekelwe kwisigqibo seNkundla ePhakamileyo ye-1896 ePlessy v. Ferguson. Kule meko yembali, iNkundla ePhakamileyo, kunye nevoti enye ephikisanayo , yahlula ukucwasana ngokobuhlanga yayingekho phantsi kweSilungiso sesi-14 ukuba izakhiwo ezihlukeneyo "zilingana ngokulinganayo."
NgoJuni ka-1963, uGosa wase-Alabama uGeorge Wallace wayemi phambi kweengcango zeYunivesithi yase-Alabama ekuthintela abafundi abamnyama ukungena kunye nocelomngeni karhulumente ukuba angenelele.
Kamva ngaloo mini, uWallace wanikela kwiimfuno zikaAsst. Igosa likaGeneral Gen. Nicholas Katzenbach kunye ne-Alabama National Guard bavumela abafundi abamnyama uVivian Malone noJimmy Hood ukuba babhalise.
Ngethuba lonke le-1963, iinkundla zombuso zalawula ukuhlanganiswa kwabafundi abamnyama kwizikolo zikarhulumente kulo lonke elaseMzantsi. Naphezu kwee-odolo zenkundla, kwaye kunye neepesenti ezi-2 kuphela zabantwana abamnyama baseMzantsi abaya kwiziko zonke ezimhlophe, i-Civil Rights Act ka-1964 egunyazisa iSebe lezoBulungiswa base-US ukuba iqalise izikhwama ze-scorpion school zibhalwe kumthetho nguMongameli uLyndon Johnson .
Icandelo elincinci, kodwa mhlawumbi elibonisa umgaqo-siseko wokulwa "amalungelo" athi "phambi kweNkundla ePhakamileyo" ngoNovemba ka-1999, xa i- Attorney General yaseUnited States uReno ithatha iGqwetha likaGqwetha lika-South Carolina uConon.
UReno v. Condon - Novemba 1999
OoBawo Osekelweyo ngokuqinisekileyo bayaxolelwa ngenxa yokulibala ukukhankanya iimoto kuMgaqo-siseko, kodwa ngokwenza njalo, banike amandla okufuna nokukhupha iilayisenisi zamatyala kumazwe phantsi kwesiTshintsho seshumi. Oku kucacile kwaye akusoloko kuphikisana, kodwa onke amagunya anemiqathango.
Amasebe karhulumente weemoto (i-DMVs) afuna abafakizicelo ukuba bafumane iilayisenisi zokuqhuba ukuba banikele ngolwazi lomntu siqu kubandakanya igama, idilesi, inombolo yefowuni, inkcazo yemoto, inombolo yokhuseleko loluntu , ulwazi lwezobisi kunye nefoto.
Emva kokufunda ukuba abaninzi be-DMV babesithengisa le nkcazelo kubantu ngabanye nakwamashishini, i-US Congress yenze uMthetho woKhuseleko loBucala we-1994 (iDPPA), ukumisa inkqubo yokulawula ukukhawulela amandla okuveza ulwazi lomntu ngamnye lomqhubi ngaphandle kwemvume yomqhubi.
Ekubambisana ne-DPPA, iSouth Carolina imithetho yavumela i-DMV kaRhulumente ukuba ithengise le ngcaciso. I-Attorney General Jikelele ye-South Carolina iCompon ifake isicelo sokuthi i-DPPA iphule i-10 ne-Eleventh Amendments kuMgaqo-siseko wase-US.
INkundla yeSithili inqume ukuxhasa iNingizimu Carolina, ivakalisa ukuba i-DPPA ayihambelani nemigaqo ye-federalalism ehambelanayo kwiSahlulo segunya loMgaqo-siseko phakathi kwe-States kunye ne- Government Government . Isenzo seNkundla yeSithili sasivimbela ngamandla karhulumente wase-US ukunyanzelisa i-DPPA eSouth Carolina. Esi sigwebo sagxininiswa kwakhona yiNkundla yeSithili yeSibheno seSine.
I-Attorney General Jikelele uReno wanxusa izigqibo zeNkundla zeSithili kwiNkundla ePhakamileyo.
NgoJan 12, 2000, iNkundla ePhakamileyo yase-United States, kwimeko kaReno v. Condon, yalawula ukuba i-DPPA ayizange iphule uMgaqo-siseko ngenxa ye-US Congress amandla okulawula ulawulo lwentsebenziswano olunikezelwa ngalo yiSiqendu I, Icandelo 8 , icandelo 3 loMgaqo-siseko.
Ngokutsho kweNkundla ePhakamileyo, "Ulwazi lweemoto eziye zathengiswa yi-States zisetyenziswe ngabaqhorensi, abakhiqizi, abathengisi abazithengisayo kunye nabanye ababandakanyekayo kwiintengiso zangaphandle baqhagamshelane nabaqhubi abaneenkcukacha ezicwangcisiweyo. ishishini ngamaziko ahlukeneyo karhulumente kunye nolwangasese kwimicimbi enxulumene nokuhamba ngemoto. Ngenxa yokuba ulwazi lwabaqhubi, ukuchonga ulwazi, kulo mxholo, inqaku lesorhwebo, ukuthengiswa okanye ukukhululwa kwimizi-mveliso yamashishini inele ngokwaneleyo ukuxhasa umgaqo-nkqubo. "
Ngoko, iNkundla ePhakamileyo iqinisekisile uMthetho woKhuseleko weMfihlo ka-1994 kwaye i-States ayikwazi ukuthengisa ilayisenisi yethu yomqhubi womntu ngaphandle kwemvume yethu, into enhle. Ngakolunye uhlangothi, ingeniso evela kuloo ntengiso elahlekileyo kufuneka yenziwe kwiirhafu, okungekho into enjalo. Kodwa, yile ndlela esebenza ngayo.
I-Democratic Democratic Party
Intsebenziswano enkulu ye-1787
Abongameli baseMelika abaneebhedi
Inxaxheba yabantwana baseMerika baseMerika kwiCawa eliMnyama
Indlela enokuphumelela ngayo ngokulandela intshutshiso yakho
ULea Uthando - Ukuhambelana kweZodiac
Izikhokelo zokuBumba zePatio ezi-7 eziphezulu
I-GMAT Test Tip - Iinombolo ezilandelelanayo
Yintoni yokugqoka phantsi kweentambo ze-Ski
I-PBR's All-Time Toughest Bulls ukuhamba
UkuCoca kweNtsantyambo kunye neCharas yakho
Yintoni enokuyenza xa ungekho i-Chemistry
Indlela yokudweba ikati kwiPencil Colors
16 Juni 1976 Ukuvukela kwabafundi eSoweto
Iyini Inkunzi Yogxininiso?
Ubungqina bukaDavid Auburn
Amakhosi akwaMandulo kunye noKuvuselela ubuNtshonalanga baseNgilani
Ubungqina Bokuzivocavoca Iingcali zoBugcisa: Ukuthatha umgca wokuhamba
I-Socialology ye-intanethi kunye ne-Digital Sociology